हरि पराजुलीका पक्षमा १० जना उभिए मेरो पक्षमा एक हजार वकिल उभिन्छन्: रामकुमारी झाँक्री (अन्तर्वार्ता) - Enepalese.com
हरि पराजुलीका पक्षमा १० जना उभिए मेरो पक्षमा एक हजार वकिल उभिन्छन्: रामकुमारी झाँक्री (अन्तर्वार्ता)
इनेप्लिज २०७२ असार २२ गते १२:५८ मा प्रकाशित
कृषिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमालेका केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीले अदालत गुहार्ने चेतावनी दिएपछि नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री झनै कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन थालेकी छिन् । एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा अत्याधिक मत पाएर निर्वाचित भएकी झाँक्रीले पार्टीभित्रका विकृतिलाई सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरुमा छताछुल्ल पार्ने गरेकी छिन् । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट खारिएकी झाँक्री किन पार्टीमा स्थायी प्रतिपक्षीझैँ उभिएकी छिन् ? यसैको जवाफ खोजेका छन् दैनिक नेपालका विश्वास खड्काथोकीले:
कृषि मन्त्रीको फोटो र भिडियो सार्वजनिक भएपछि तपाईँ फेसबुकमार्फत निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो, यो त पार्टीमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो होला नि ?
त्यतिबेला म लमजुङमा थिएँ । निकै धेरै पत्रकार साथीहरुले प्रतिक्रिया माग्न फोन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मैले मेरो नीजि बिचार फेसबुकमा राखेकी हुँ । त्यति कुरा राख्नका लागि केन्द्रिय कमिटीको बैठक कस्ले डाक्छ ? मैले ऐन मौकामा मेरो कुरा भनिन भने, म जिउँदो छु कि छैन भन्ने हुन्छ । यस्ता कुरा राख्नका लागि पार्टीमा बन्देज पनि छैन । म भन्दा दिग्गज नेताहरुले पनि कस्ता कस्ता विवादित विषयबारे फेसबुकमा लेखेका छन् । बरु, म विवादित विषयमा कम बोलेकी छु ।
हरि पराजुलीजीले नियतबश त्यस्तो काम नगरेको प्रतिक्रिया दिँदै आउनु भएको छ ?
नियतबश थियो या थिएन त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर त्यहाँ त्यतिधेरै मानिस थिए, सुरक्षा अंग थिए त्यो ठाउँमा उहाँले नियत राखेरै त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो होला भन्ने त मलाई पनि लाग्दैन । तर, जे काम भयो त्यो अशोभनीय छ । सार्वजनिक व्यक्तित्वले गर्ने काम उहाँले गर्नु भएन ।
राजीनामा नै दिनुपर्ने स्तरको गल्ती हो त उहाँको ?
राजीनामा नगराउने कुरै आएन नि । नियत थियो या थिएन त्यो अलग कुरा हो । तर, काम त गलत भयो नि । गलत काम गरेपछि उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यो भनेको सरकारमा भएपछि पद छाड्ने नै हो ।
उहाँले मन्त्री त छाडिसक्नु भयो, एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ चाँहि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
‘चेक एण्ड व्यालेन्स’का लागि पार्टीमा अनुशासन आयोग छ । अनुशासन आयोग पार्टीको केन्द्रिय कमिटी जस्तै शक्तिशाली छ । उहाँहरुको ध्यान पुगेको होला । नपुगे पनि निवेदन परेको होला । आयोगले केही न केही गर्ला र गर्नुपर्छ । मैले आयोगका अध्यक्षभन्दा अगाडि बढेर कुरा गर्न मिल्दैन । बरु, अध्यक्षलाई दबाब दिन मिल्छ ।
भूकम्पपछि एमालेको स्वयंमसेवक परिचालन अभियानले जनता माझ राम्रो छाप छोडेको थियो, यो प्रकरणले त बदनामको भारी बोकायो, हैन ?
यो मात्र होइन, मन्त्री नियुक्ति लगायत अन्य निर्णय पनि विवादास्पद छन् । एक युग महिलामाथि हिंसा गरेका मान्छेहरु मन्त्रीमा छन् । यसले हाम्रो नेतृत्वले कस्तो मान्छे छान्छ, नेतृत्व कत्तिको जवाफदेही छ भन्ने देखाउँछ । हामीजस्ता गधा भएर काम गर्ने त छँदै छौँ नि । तर पार्टी बद्नाम गर्ने त त्यस्तै खल्तीका मान्छेहरुले हुन् ।
तपाईँ र केही मिडियालाई मानहानीको मुद्दा हाल्ने पराजुलीको प्रतिक्रिया आइरहेको छ, मुद्दा लड्न तयार हुनुहुन्छ ?
उहाँले निर्दोष छु भनेर मुद्दा दिनु भए धेरै राम्रो नि । हामीलाई सजाय भयो भने त अबको दिनहरुमा सबैको मुख टालिएला नि त !
त्यसो भए तपाईँ मुद्दा झेल्न तयार हुनुहुन्छ ?
त्यो फोटो र भिडियो हेर्दा मन्त्रीले ठिक काम गर्नुभयो वा आशिर्वाद लिएको हो भनेर कसैले भल्ला जस्तो लाग्दैन । त्यो कार्य गलत नै थियो । म त्यसको ‘डिफेन्स’ गर्छु । उहाँले चार जना अधिवक्ता, दुई जना भुतपूर्व महान्याधिबक्ता र १० जना वकिलाई बोल्न लगाउने कुरा गर्नु भएको छ रे । म दाबाका साथ भन्छु, उहाँका १० जना आउँछन् भने मेरा पक्षमा वकालतनामा गर्न एक हजार जना आउँछन् ।
पार्टीले एक जना मन्त्रीलाई त फिर्ता बोलायो तर त्यस्ता खराव आचरण भएकाहरुलार्ई कहिले कारवाही गर्ला भन्ने आशयको स्टाटस सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । कुन–कुन नेतालाई भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पाको कुरा उठाएकी हुँ । उहाँ अहिलेको मन्त्री भएकोले पनि प्रश्न उठाएँ । नागरिकको हैसियतले यस्तो कुरा उठाएकी हुँ । अहिले महिला हिंसा, महिलाको अधिकार, समानताको तमाम मुद्दा सतहमा छन् । हामीले यस्ता मान्छे मन्त्री बनाउँछौ भने महिला संरक्षित, सुरक्षित छन्, न्याय पाउँछन् भन्ने कुरा कसरी परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? त्यस्ता मान्छेहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा कस्तो कानुन् बन्छ ? हाम्रै पार्टीमा केही बहुविवाह गर्नेहरु पनि हुनुहुन्छ । त,र त्यसमा मलाई मुद्दा हाल्न हक हुँदैन । पार्टीभित्र नैतिक प्रश्न चाँहि उठाइन्छ । महाधिबेशनमा ब्यानरनै टाँसेर कुरा उठाएका थियौँ । त्यो ब्यानर राति कसले फालेछ ।
यस्तो कुराको फेसबुकमा मात्र हल्ला गरेर बस्ने कि पार्टीभित्र अभियाननै सञ्चालन गर्ने ?
अध्यक्ष कमरेड (केपी शर्मा ओली) ले चार जना मन्त्री हटाइसक्नु भएको छ । त्यसका कारण के हुन् हामीले थाहा त पाएनौँ, एउटाको सम्म थाहा पायौँ । अध्यक्षले गलत काम गर्ने मान्छेलाई हटाउँदै जानुभएको छ । उहाँले कृपाशुरलाई हटाउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनकी एउटा मान्छेको जिन्दगी ३७ वर्षसम्म प्रताडनामा बितेको छ । परिकल्पना गर्नुहोस्, ती आमाको जवानी कसरी बिते होला ? हाम्रा नेताको छोरीबहिनीलाई त्यस्तो परेका भए के गर्थे ? यस्ता गलत तत्वलाई आजको दिनमा क्षमा गर्नु हुँदैन । उहाँले राजीनामा गराउनुभएन भने म मात्र होइन् तमाम महिलाहरुले केही गर्नुपर्छ ।
विचार कम्युनिष्ट लिने अनि बहुविवाह गर्नेहरु धेरै छन् हगी ?
हाम्रो पार्टीमा बहुबिवाह, यौन हिंसाजस्ता विषयहरुलाई क्षम्य मानिँदैन । कुनै समय यस्तो थियो, प्रेम सम्बन्धलाई पनि पार्टीले स्वभाविक मान्दैनथ्यो । पार्टीमा केही बहुविवाह गर्नेहरु नभएका होइनन् । माओवादीहरुमा चाँहि डिभोर्स गराएर विवाह गर्ने अलि बढी नै देखिएको छ । माओवादी, जनमोर्चा लगायतका पार्टीमा यस्तो कुरा स्वभाविक जस्तो देखिन्छ ।
तपाईँ पार्टीमा सँधै प्रतिपक्षझै देखिनुहुन्छ नि ?
यति तलको कार्यकर्ताको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको अर्थ हुँदैन । केन्द्रीय कमिटिको मंसिर २२ गतेदेखि बैठक बसेको छैन । पार्टीको गतिविधिबारे हामीलाई केही थाहा नै छैन । आँखा नदेख्नेलाई दिन हो कि रात हो, उस्तै लाग्छ नि । हो, हामी त्यस्तै भएका छौँ ।
उसो भए तपाईँजस्तै धेरै केन्द्रीय नेताहरुको आँखामा पट्टि बाँधिएको छ ?
हो, केही पनि थाहा छैन ।
के कुरामा तपाईंको असन्तुष्टि ?
मान्छेहरु कसरी मन्त्री भए तिनका बारेमा हामीलाई केही थाहा छैन । पार्टी पद्दतिमा निर्णय गरेर अनुमोदन गर्ने चलन हुन्छ । त्यस्तो हुँदा तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान, पार्टीलाई योगदान गरेकालाई लैजान सकिन्थ्यो । हिजो पार्टीमा संगठिन हिसाबले योगदान गरेको, चरित्र भएको र काम गर्नसक्ने क्षमता राख्ने मान्छेलाई बनाउन सकिन्थ्यो । पैसामा योगदान गर्ने मान्छेलाई सभाषद, मन्त्री बनाउने, गुटको लिस्टमा हालेर केन्द्रीय सदस्य जिताउने गरिएको छ । यो आन्दोलन कहाँ लैजान खोज्या हो ? मेरो गम्भीर आपत्ति भनेको यसैमा हो । हामी पार्टीमा लागेबापत नियमित पार्टीलाई पैसा तिर्छौँ । हाम्रो स्वाभिमानलाई सौदाबाजी गरेर पैसामा योगदान गरेका मान्छेलाई लाभका पदहरु दिने काम भएको छ ।
अहिले एमालेको इफिसेन्सीमा एकदम प्रश्न उठेको छ । खल्तीका पनि काम नलाग्ने सडे का, गन्हाएका मान्छेहरुलाई मन्त्री बनाइएको छ । एकाध मान्छेबाहेक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका मान्छेको पर्फमेन्स राम्रो छैन । यो सबैभन्दा कमजोर टिम हो ।